Ahoana no ahafahana mamadika rindranasa mifototra amin'ny teny fanalahidinao manan-danja?
Fomba malaza fa tsy misy ny fanatsarana ny fikarohana raha tsy misy teny fanalahidy toy ny misy, raha ny marina, tsy misy fomba hafa mety hahitanao ny mpanjifanao mety hitanao ao amin'ny valin'ny fikarohana. Noho izany dia fototra iorenan'ny SEO izany. Sarotra ny manatsara ny tranokalanao sy ny votoatinao raha tsy nanao fikarohana ianao. Raha tsy manana teny fanalahidy ianao, dia tsy misy dikany ny fampiroboroboana SEO anao.
Amin'izao fotoana izao, ny fanentanana lisitry ny teny filamatra mahaliana sy be dia be dia be tsy sarotra - find a plumber. Na izany aza, dia mety ho sarotra kokoa ny mahafantatra izay tokony hatao ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Koa satria maro amin'ireo mpivarotra an-tserasera no mampiasa ny fitaovana fikarohana toy izany, dia mifarana amin'ny soso-kevitra mitovy ho an'ny orinasa iray.
Na izany aza, raha hiresaka momba ny fitaovam-pikarohana fikarohana momba ny siansa toy ny Semalt Auto SEO, Moz sy ny hafa. Tsy milaza amin'ny mpivarotra ho sarotra ihany koa izy ireo amin'ny voalohany amin'ny fikarohana. Na dia afaka manome hevitra anao aza izy ireo, dia tsy 100% marina ihany koa. Raha manontany tena ianao hoe nahoana izy ireo no tsy afaka hanome anao vokatra tsara ho an'ny volanao, dia hanokatra anao tsiambaratelo aho. Tsy misy olona afaka mahafantatra marina ny momba ny Google misy pejy Internet. Ny zavatra rehetra fantatsika dia ny fampiasana Google mihoatra ny 200 ireo singa fototra, ny tena manan-danja amin'izany dia ny AI-algorithm, backlinks, ary ny votoatiny. Ankoatra izay, fantatsika fa mikatso mandrakariva ny fanandramana amin'ny famolavolana sy ny algorithm vaovao AI. Sarotra ny manohy ny famolavolana Google tsy misy hatak'andro, izany no mahatonga ny fampielezan-tsindrim-peo fikarohana rehetra tsy afaka hanome anao 100% antoka ny fahombiazan'ny orinasan-tserasera. Na dia izany aza, mbola afaka manakaiky ny mety ho an'ny Google isika amin'ny fanatanterahana ireo fomba amam-panao sedra tena ilaina. Andao hodinihintsika ny antsipirihany sasany.
Backlinks optimized amin'ny keywords dia mila!
Any amin'ny faran'ny fampielezan-kevitra fanamafisana, dia mila mamantatra ny laharana ambony indrindra amin'ny teny fototra sy ny isa sy ny kalitaon'ny backlinks misy pejy web. Raha hifidy ny teny fikarohana matanjaka indrindra dia azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo fitaovana amin'ny aterineto matihanina - Semalt Auto SEO , SEMRush na MOZ. Izy rehetra dia hanome anao araka ny tokony ho izy sy ny kalitao ary manampy amin'ny fanatsarana ny SEO tranonkala. Tsy misy na iray aza afaka maimaim-poana, fa ohatra, Semalt manome mpanjifa amin'ny vanim-potoana fitsapana maimaim-poana izay manampy hahatakatra ny tombontsoa azon'ity rindrambaiko ity ho an'ny orinasanao an-tserasera.
Amin'ny fampiasana fitaovana fanatontosana matihanina, dia ho azonao amin'izay ny tenimiafin'ireo mpifaninana aminao sy ny toerana misy azy ao SERP. Ankoatra izany, ho hitanao ny maha-zava-dehibe ny sehatra. Ny rohin'ny sehatra misimisy kokoa amin'ny pejy iray, ny Google ambony kokoa dia hamaritra azy amin'ny valin'ny fikarohana.
Na izany aza, amin'izao androntsika izao, dia tsy dia misy dikany loatra ny anjara andraikiny raha oharina amin'ny backlinks. Izany no antony mahatonga ny isan'ny rohy dom-ponenana tsy mamela ny fiakarana amin'ny toerana 1 ka hatramin'ny 10. Ny hasarobidin'ny faritra dia asehon'ny UR na URL Rating. Ny UR dia sampana mahomby amin'ny sehatra izay mampifandray amin'ny tranokala iray.
Raha te hanandratra avo ny SERP, mila manana tanjona tsara azo atao tsara kokoa ianao ary miverin-dalana tsara avy amin'ny sehatra manerantany. Ankoatr'izay, ireo andinin-tsoratra farany momba ny tsipika fanoratana dia tokony hahitana ireo teny manan-danja sy avo lenta izay hanan-danja bebe kokoa amin'ny tranokalanao SEO.